जिन्दगी कथा सङ्ग्रहभित्र रुमलिदा कथाकार सञ्जय काउछाको जिन्दगी
/ शनिबार, माघ २९, २०७८
– अरुणबहादुर खत्री नदी कृति समीक्षा
जिन्दगी कथा सङ्ग्रहभित्र रुमलिदा कथाकार सञ्जय काउछाको जिन्दगी नामक कथा सङ्ग्रह मेरो हात परेको छ । यो कथा सङ्ग्रह २०७ साउनमा प्रकाशित भएको रहेछ । यसभित्र जिन्दगी, बेड नं. ४२०, ब्रेटर नेपाल, चाँदनी लगायत विभिन्न शीर्षकका ८ वटा कथाहरु समावेश गरिएका छन् । यस सङ्ग्रह भित्रको जिन्दगी शीर्षकको पहिलो कथामा जगत् अवतरण पश्चात जिन्दगी एक बाजी रोयो । तत्पश्चात् जिन्दगीलाई न ७३ घढसहाइ ध ७३ घढसवाइ गराइवरी न्यानो थाङ्नामा बेरबार पारियो । राधिका जननीको विगौती द ७ त्रगयतसधको भोजन गराइयो । एक नवजात पेट द ७ त्रगयतसधको भोजन ग्रहण गरिसके पछि जिन्दगी स ७३ घढसकला गर्दा भयो भनिएको छ । श ७३ घढसक्रबारको दिन हप्ता भरिको थकान निवारण गर्ने दिन थियो । मेरा लागि किन भने प्रत्येक हप्ता घरका परिवारसँग छोटो भए पनि क७३घढसरा गन ७३ घढर्सपर्ने एउटा नियम नै बनिसकेको थियो । आज पनि मैले २० रियलको कार्ड रिचार्ज गरिवरी परिवारसँग लगभग ३,४ मिनेट जति छोटो र मिठो वात गरे चाँदनी शीर्षकको कथामा कथाकारले भनेका छन् । लभ ग ७३ घढसरु शीर्षकको कथामा तपाईले पक्कै चिनेको ह ७३ घढसन ७३ घढसपर्छ अङ्कल । प्लिज मेरो बारेमा उसँग राम्रो क ७३ घढसरा गरिदिनोस् है । ताकि मप्रति ऊ इम्प्रेस होस् । किनभने तपाईजस्तो पाको मान्छेको क ७३ घढसरा प्रति सबैलाई विश्वास ह ७३ घढसन्छ । उसले मलाई अन७३घढसनय गयो । ह ७३ घढसन्छ म भनिदिन्छ ७३घ ढस तिमी द ७३ घढसईको जोडी पनि मिलाई दिने प्रयास गर्नेछ ७३ घढस तर मैले चिन्न ७३ घढस पनि त पर्यो नि हैन ७ स भनिएको छ ।
लभ ग ७३ घढसरु कथामा द ७३ घढसईजनाको सार्वजनिक गाडीमा भेट भयो । ठिटोको चरोटमात्र हैन आइसवियरदेखि राइसवियरसम्म पनि चलाउने बानी थियो । कसरी केटीलाई आफ्नो बनाइ छाड्ने भन्ने तरिका सिकाउँदै केकन प्रेम गर्न सिकाउने ग७३घढसरु बनेको मान्छे पछि त्यही ट्यापेले आफ्नै छोरीको नाम लिँदा बल्ल छाँगाबाट खसेझैँ भएको क ७३ घढसरो पनि देखाइएको छ । द ७३ घढसई नारी कथामा समाजमा आएका विकृतिलाई देखाउन खोजिएको छ । नारी र प ७३ घढसरुष सम्बन्धमा आउने यस्ता धेरै बेथितिहरु मध्ये यो पनि एक हो प ७३ घढसरुषले इन्द्रिय स ७३ घढसखको लागि जे गरे पनि ह ७३ घढसने तर नारीले भौतिक स ७३ घढसख लिनै ह ७३ घढसँदैन भन्ने धारणा पनि कथामा प्रस्त ७३ घढसत गरिएको पाइन्छ । यो गलत हो । तर प्रमिलाले आफ्नै हाइनाताभित्र ज ७३ घढसन सम्बन्ध गाँसेकी छिन् त्यो अवश्यक पनि राम्रो होइन र रमिला जस्ती सोझी नारीमाथि रामेले गरेको व्यवहार निन्दनीय हो । सरप्राइज शीर्षकको कथाभित्र अफिसको दाँयापट्टि एउटा ठ ७ त्रगयतसलो कम्पाउण्डमा लामो टहरो हाम्रो कम्पनी थियो । फ ७३ घढसजाङ्गले हामीलाई एक नम्बर गेटबाट भित्र छिरायो । ढोकामा प ७३ घढसग्दा नप ७३ घढसग्दै कोरिया र यो एस. एण्ड टी. मेटलमा स्वागत छ है भाइहरुलाई भन्दै एकजना नेपाली दाज ७३ घढस प्रकट ह ७३ घढसन ७३ घढसभयो । कम्पनीले तीनजना नेपालीहरु ल्याउँदैछ भन्ने क ७३ घढसरा थाहा थिएन उहाँलाई । दाज ७३ घढस हामीलाई देखेर यस्तो ख ७३ घढससी ह ७३ घढसन ७३ घढसभयो जस्तो कि हामी छ ७३ घढसट्टीमा गएर फर्किदैछौ भनिएको छ।
जे जस्तो भए पनि काउछाका कथामा रहेका चरित्रहरु हाम्रै समाजका भएकाले कथाहरु पठनीय बनेका छन् । उनका कथाहरुमा नेपाली समाजको तन र मन, विकृति र बिसङ्गति, सम्बन्धहीन सम्बन्ध, भाव मनोभावहरु सरल र श्लील भाषा शैलीमा प्रस्त ७३ घढसत भएका छन् । उनले हाम्रो समाजमा भएका सामाजिक विकृति, विसंगति र रुढिवादी परम्परालाई बडो राम्रोसंग उन्ने काम गरेका छन् । उनले लेखेका कथाहरुले मानिस र समाजका विविध पक्षलाई उजागर गरेको छ । यो कथा पढेपछि कथाका पात्रहरु आँखा अगाडि ह ७३ घढसंदै मनभित्र बस्छन् । अम ७ त्रगयतसर्त प्रेम शीर्षकको कथाभित्र आज म साह्रै ख ७३ घढसशी छ ७३ घढस स ७३ घढसमनाजी आखिर हामीहरु अनलाइनमा प ७३ घढसनः भेटियौ । यो ख ७३ घढसशीको वर्णन गर्न म सक्दिन स ७३ घढसमनाजी । अहिले किबोर्डमा मेरा हातहरु काँपिरहेका छन्र स्क्रिनमा ध ७३ घढसमिल देखिरहेको छ ७३ घढस म किनभने मेरा आँखाहरु रसाइरहेका छन् । वास्तवमा यो साँचो पनि थियो । उसका हातहरु काँपिरहेका थिए, आँखाहरु रसाइरहेका थिए भनिएको छ । ग्रेटर नेपाल शीर्षकको कथाभित्र भारत नेपाललाई अस्थिर बनाएर आफ ७ त्रगयतसमा आनतसत गराएर आफ ७ त्रगयतस अन ७३ घढसक ७ त्रगयतसल चलाइराख्ने नेहरुको पालादेखिको नीतिमा चलिरहेको थियो । खासमा भारतको अभिष्ट नेपाललाई भारतमा विलय गराउन ७३ घढस नै थियो ।
त्यसको पक्का प७त्रगयतसर्वाधार नागरिकता विधेयकले तयार पारेको थियो । अन्ततः भारत आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएरै छाड्यो भनिएको छ । यो कथामा कथाकारले हरिबहाद ७३ घढसर ७ नतसेष्ठको एकादेशको कथा जस्तै तर सरल भाषामा नेपालमाथि भएका चलखेलको फिक्सन फिलिङ्स दिन सफल भएका छन् ।काउछाका कथाहरु भद्दा खालका छैनन् । चिटिक्क कलेवर र मीठा शैलीका छन् । साना आकारका कथा भए पनि यी कथाहरु प ७ त्रगयतसर्ण रचना ह ७३ घढसन् । कथाकार काउछामा घटना टिपेर अन ७३ घढसक ७ त्रगयतसल परिवेशले सिगार्ने ख ७३ घढसबी छ । यिनको कलम तिखो छ र समाजका विकृति विसङ्गति प्रति प्रहार गर्न सक्षम पनि छ । उनका अधिकांश कथाहरुमा चरित्र चित्रणलाई विशेष जोड दिइएको छ । उनको कथा लेख्ने शैली सरल र बोधगम्य छ । अन्त्यमा कथाकार सञ्जय काउछाको अरु नयाँ कृतिहरु जन्मन सकोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछ ७३ घढस ।
विधाः कथा सङ्ग्रह
प्रकाशकः सत्यशीला पब्लिकेशन प्रा.लि., ब ७३ घढसटवल ११, रुपन्देही
पृष्ठः ७ बmउस६
सामाख ७३ घढसशी मार्ग, सरकारी धारा, काठमाडौं
फोन नं. ४३५३४१२, ४३५३५९४